Toerana tsara indrindra any Etazonia hitsitsiana vola amin'ny fijanonana ao amin'ny hotely mihoatra ny Airbnb
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Toerana tsara indrindra any Etazonia hitsitsiana vola amin'ny fijanonana ao amin'ny hotely mihoatra ny Airbnb
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Resorts • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Toerana tsara indrindra any Etazonia hitsitsiana vola amin'ny fijanonana ao amin'ny hotely mihoatra ny Airbnb.
Ny tranokala fanofana fialan-tsasatra dia manolotra fijanonana tsy manam-paharoa miaraka amin'ny tantara hotantaraina, ary avelao ny mpampiantrano hahazo vola fanampiny rehefa any ivelan'ny tanàna, fa tena mbola mora ve izany?
Ny salanisan'ny vidin'ny efitrano fandraisam-bahiny roa eo akaikin'ny Waikiki Beach isan'alina dia $74 fotsiny, raha toa ka $271 ny fijanonana amin'ny Airbnb mitovy amin'izany.
Ny fijanonana mandritra ny alina eo akaikin'ny Valan-javaboarin'i Grand Teton dia mitentina $231 fotsiny amin'ny hotely iray fa $847 mitentina $XNUMX amin'ny Airbnb.
Mila fiatoana indray mandeha ny tsirairay, ary ny fialan-tsasatra dia fomba azo antoka hialana sasatra sy hahatsiarovana vaovao. Na izany aza, ny saran'ny fialan-tsasatra dia afaka manampy alohan'ny hahatsapanao ary ny ankamaroantsika dia aleon'ny ankamaroantsika mifoka rivotra amin'ny hetsika manova fiainana, fahatsiarovana ary sakafo hafakely, fa tsy mitsoka ny teti-bola amin'ny efitrano iray.
Sarotra ny mahafantatra izay karazana trano fonenana mety amin'ny teti-bolanao. Miaraka amin'ny Airbnb saika ny tanàna rehetra, manomboka any Londres ka hatrany Hong Kong, dia mora kokoa noho ny hatramin'izay ny manofa.
Ny manam-pahaizana momba ny indostria dia nandinika ny vidin'ny lisitry ny Airbnb sy ny hotely any amin'ny toerana fitsangatsanganana 80 ambony indrindra, any Etazonia sy manerana izao tontolo izao, mba hampisehoana hoe iza no fomba fijanonana mora kokoa amin'ny tetibola.
Tahirim-bola isan-jato: 72.86%
Ity paradisa Hawaiiana mahavariana ity dia mipetraka ao anatin'ny manodidina an'i Honolulu ao amin'ny Nosy Oahu. Malaza amin'ny tora-pasika fasika fotsy sy ny ranomasina manga lalina, Waikiki mahasarika mpizahatany an'arivony isan-taona ary toerana fialan-tsasatra lehibe ao amin'ny nosy.
Na dia manana toerana Airbnb maherin'ny 300 aza ilay faritra, dia manjaka amin'ny morontsiraka ny hotely sy toeram-pialan-tsasatra. Ny vidin'izy ireo dia miovaova be ary ny fidirana amin'ny haitraitra toy ny dobo sy spa dia mety hidika fa handoa bebe kokoa ianao.
Na izany aza ny salanisan'ny sarany isan'alina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny roa akaiky Waikiki Beach dia $74 fotsiny, fa ho an'ny fijanonan'ny Airbnb mitovy amin'izany dia $271 ny vidiny! Ho an'ny marika 72.9% dia tsara kokoa ny miala sasatra raha misafidy ny safidy nentim-paharazana.
Tahirim-bola isan-jato: 72.79%
Rehefa mieritreritra ny valan-javaboarin'i Etazonia ianao, dia mety ho tonga ao an-tsainao ny Yellowstone, Yosemite na Ziona. Na izany aza, ny tontolo mahasarika mitovy amin'ny Parc National Grand Teton mahasarika mpizaha tany marobe mitady aventure.